Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Gaalkacyo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Gaalkacyo “Sawirro”
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo kadib markii ay safar deg-deg ah ugu ambabaxeen magaalada Muqdisho si ay ugu qeyb-galaan Aaska Marxuumiintii ku dhintay weerarkii bahalnimo ee sharwadayaasha al-Shabaab ku qaadeen hotel Suxufi, gaar ahaan Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon, Ganacsade Cabdirashiid Shire Ilqeyte iyo Abaaduulihii hore ee XDS Cabdikariin Yuusuf Aaden.
Madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray Gaalkacyo waxuu kula hadlay Saxaafada waxuuna yiri “waxay naga wada istaahilaan marxuumiintaasi inaan doorkooda xusno, falka noocaan oo kale ahna wuxuu nagu sii dhiirageliyaa inaanu sii laba jibaarno dadaalki ay wadeen ee ku aadanaa samata bixinta iyo dib u dhiska dalkeena”.
“Dagaalka lagu sifeynayo argagaxisada waa in la sii xoojiyo, isla markaana Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo ciidamada AMISOM ay xooga wada saaraan sidii loo cirib tiri lahaa argagaxisada. Haddii aan argagaxisada laga ciribtirin dalka waxey ku dhiiranayaan falalka noocaan oo kale ah. Dowladda GalMudug iyadoo kaashaneysa Dowlada Dhexe iyo Beesha caalamka waxaa ka go’an in ay deegaanadeeda ka cirib tirto argagaxisada” ayuu yiri Madaxweyne Guled.
Wasiirka Maaliyadda oo soo xiray shirkii looga tashanayey nidaamka maaliyadda dalka “Sawirro”